Guriga aad ku leedahay dhul la haysto maku diidi lahayd 100-milyan oo doolar, haddii laguu gaaro? – Radio Daljir
Guriga aad ku leedahay dhul la haysto maku diidi lahayd 100-milyan oo doolar, haddii laguu gaaro?
Janaayo 20, 2019 11:09 b 0
Muwaadin u dhashay Falastiin oo degan magaalada Hebron ee galbeedka Daanta Galbeed ee dhulka reer Falastiin ayaa ka diiday Israa’iili doonayay inuu gurigiisa uu uga iibiyo boqol milyan oo doolarka Mareykanka.
Ninkan oo lagu magacaabo Cabdul Ra’uuf Al-muztasib ayaa ka diiday dalabka maal qabeen u dhashay Israaiil uu ku doonayay in guriga iyo dukaan uu Falastiiniga lahaa oo ku yaala bartamaha magaalada qadiimiga ah ee Habron.
Al-Muxtasib ayaa diiday dhammaan dalabka Isaa’iiliyiinta ee gurigiisa iyo dukaankiisa inuu ka iibiyo ah, iyadoo hoygan uu aad ugu dhowyahay masaajidka Ibraahimi ee magaaladan qadiimiga ah.
“Waxaan diiday boqol milyan oo doolar” ayuu yiri Muxtasib oo intaasi ku daray ” waxaan ku diidi doonaa dhammaan lacagta dunida taala oo dhan, mana ku wareejinayo qiimahaasi iyo adduunka oo dhan dhulkayga iyo dadkayga, laakiin lacagtu waa wax aad u wanaagsan balse waa marka ay nadiif tahay” ayuu sidoo kalle yiri Cabdul Ra’uuf Muxtasib.
Isagoo la hadlayay telfishinka Al-maydeen ayaa waxaa uu sheegay in qiimaha hore uu ku bilowday 6 milyan oo doolar, kahor inta aanu qiimaha sare ugu kicin 40 milyan oo doolar, balse markii ugu dambaysay loo gaaray qiimo dhan boqol milyan oo doolar, isagoona ugu dambayn sheegay in qiimahaasi iyo ka badan uu ku iibsan doonin dhulkaasi , taasi badalkeeda uu sii ahaanayo waardiyaha masaajidka khadiimka ee Ibaarhiimi.
Dadka Israa’iiliyiinta ee ku sugan magaalada ayaa sidoo kalle u sheegay muwaadinkan Falastiiniga ah inay u fududayn doonaan safar uu ku tago dalalka Australia, Canada oo kadibna ka bilaabo ganacsi iyo nolol cusub, balse dalabkaasi ayuu diiday.